ग्लास फाइबर प्रबलित राल छत पाना RY720-बी - चीन हुबेई Shengyu निर्माण सामाग्री
Shengyu कृत्रिम राल छत पाना, Geloy एएसए राल संग लेपित, एक विशेष 3-पत्र सह-extruded छत पाना छ। परम्परागत छत स्थापना गर्न सजिलो छ कि हल्का स्लैब मा धनी रंग संग ढाँचा टाइल्स। यो एक धेरै मजबूत स्लैब, हावा र असिना गर्न प्रतिरोधी, जहाँ एक उच्च esthetic कारक आवश्यक छ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। के थप छ, यो रंग र अति-बैंगनी विकिरण, dampness, गर्मी, chillness र प्रभाव अन्तर्गत शारीरिक गुण मा स्थिर रहन्छ।
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm रूपमा आवश्यक (219 को पूर्णांक धेरै) 6KG ± 0.1kg म्याट वा ग्लसी नीलो, रातो, खैरो, दीप रातो, Terracotta
शीर्ष तह सामाग्री, Geloy ईन्जिनियरिङ् राल जीई गरेको रूपमा extraordinarily आउटडोर प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। पनि अति-बैंगनी विकिरण, dampness, गर्मी, chillness र प्रभाव उजागर उत्पादनहरु रंग र शारीरिक गुण को स्थिरता बाँकी छन्। एरिजोना र फ्लोरिडा को एजिंग परीक्षण केन्द्रमा आयोजित परीक्षण कि 10 वर्ष भित्र ई5△ भन्दा कम छ प्रमाण दिन्छन्।
Shengyu कृत्रिम राल छत पाना भारी असर लागि बलियो क्षमता छ। संघाई नगर भवन सामाग्री घटक गुणस्तर पर्यवेक्षण र परीक्षण स्टेशन द्वारा आयोजित परीक्षण, त्यहाँ span र 150kg लागू लोड समर्थन 660mm को अवस्था मा कुनै दरार छ भनेर प्रमाणित गर्छ।
720mm छत पाना एक मानक टुक्रा 5.9 ± 0.1kg वजन।
अर्को: उच्च temperatuer र जंग प्रतिरोध छत पाना
ह्यान्डल गर्ने समयमा, उत्पादन हानिकारक बच्न छैन हालियो वा उत्पादन सतह scratching हुनुपर्छ। 8 मिनेट भन्दा लामो एकल पाना लागि, पर्याप्त समर्थन अंक टाइल को खुर जोगिन आवश्यक हो।
कृपया roof.The स्क्रू फिक्सिंग छैन पनि tightly.Finally कस को स्क्रू यसमा पनरोक आवरण धक्का fastened हुनुपर्छ अघि गैसकेट मा रबर पनरोक घन्टी इकट्ठा।
स्क्रू 6.3mm को 75mmand व्यास को लम्बाइ मुख्य टाइल समाधान गर्न आवश्यक छ संग पानामा surface.Screws गर्न ठाडो तय हुनुपर्छ।
Shengyu राल पाना 20 देखि 80.For गर्न छत pitches यो दायरा बाहिर भएको पिच, विशेष उपाय स्थापना समयमा लग्नु गर्नुपर्छ लागि लागू गर्दै छन्।
1 छत संरचना
डेक को सतह चिल्लो हुनुपर्छ, डेक को सामाग्री सानो विरूपण को हुनुपर्छ, डेक भन्दा बढी 12mm बाक्लो (को purlin span अनुसार) हुनुपर्छ।
दुई डेक बीच एक 3-5mm खाली विरूपण लागि अत्यावश्यक छ।
को पनरोक रोल सही ओभरल्याप संग सजिलै र ठाडो unrolled गर्नुपर्छ।
2. इस्पात संरचना
इस्पात संरचना को कोण ठीक प्रक्रिया समयमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, छत को पिच प्रभावित हुनेछ जुन। कोण को विचलन एक असमान छत कारण हुनेछ।
अली को स्टील्स विरोधी जंग उपचार हुनुपर्छ।
3. प्रबलित ठोस संरचना
ठोस को कायम गर्दा सम्मिलित आवेषण र purlins धेरै चिटिक्क र एक विमान हुनुपर्छ, छत को evenness कुनै महत्वपूर्ण प्रभाव छ।
दुवै इस्पात र काठ सम्मिलित आवेषण र purlins छत संरचना जीवन विस्तार गर्न उपचार विरोधी जंग हुनुपर्छ।
इस्पात purlins इस्पात सम्मिलित आवेषण गर्न वेल्डेड गर्नुपर्छ र काठ purlins काठ सम्मिलित सीधा आवेषण गर्न nailed गर्न सकिन्छ।
ध्यान! कुनै छत टाइल पूर्ण सामान्य घरहरू लागि, त्यहाँ underne हुनुपर्छ, आफैमा waterproofing को समस्या समाधान गर्न सक्छ
1 विरोधी-जंग उपचार: धातु purlins विरोधी जंग रंग को एक तह र खत्म कोटिंग्स दुई पत्रमार्फत लेपित गर्नुपर्छ। काठ purlins विरोधी जंग वा डामर तेल लेपित गर्नुपर्छ।
2. शीर्ष purlin को रिज टाइल्स स्थापना गर्न क्रममा रिज लाइन बाट 180mm दूरी हुनुपर्छ।
3. तल purlin को eave देखि 50-70mm दूरी हुनुपर्छ।
4 गर्नुभएको purlin ठाउँ शाही टाइल लागि 660mm छ।
Linear गर्मी विस्तार
Shengyu राल छत पाना पानामा सामान्य रैखिक विस्तार अनुमति .यसको अर्डर 0.0000493 / ℃ को रैखिक विस्तार को एक गुणक छ, हामी व्यास 2-3mm को स्क्रू भन्दा बडा एक प्वाल ड्रिल गर्न, र त्यसपछि गर्न निर्धारण बनाउन सल्लाह धेरै कस को निर्धारण बनाउन नगर्नुहोस् sheet.Please कुनै पनि dilatation जोगिन।
स्थापना मुख्य टाइल को
सही पङ्क्तिबद्ध कुनै कुरा छत संरचना कस्तो प्रकारको मात्र यो पानाहरू राम्ररी भेला गर्न सकिन्छ र straightly भएको ठाडो लाइन 50 ~ तल purlin एक gabled छत लागि sidewall को भित्री गर्न 70 मिमी र तेर्सो रेखा 150 हुनुपर्छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
को समर्थन framework.The पहिलो पङ्क्ति कुनै परिस्थितिमा Perforated हुनुपर्छ अनुसार रूपमा ठाडो निर्माण लाइन सकेसम्म नजिक पहिलो पाना ठाँउ, दोस्रो ठाडो पंक्ति को पहिलो टाइल मा ठीक।
सामाग्री टाइल को लहर शिखा मा भेला हुनुपर्छ।
विशेष हेरविचार किनभने लामो पानाहरू प्रत्येक पाना समस्या सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ लागि केही मिलिमिटरमा को पनि बन्द अस्तर मा पहिलो पङ्क्ति aligning गर्दा लिएको गर्न आवश्यक छ।
त्यसपछि दोस्रो निर्धारण गर्न मा जाने, पहिलो मा laterally दोस्रो पाना ओभरल्याप र ओभरल्याप गर्न पत्राचार जो पहिलो सबै भन्दा कम टाइल मा आत्म स्क्रू संग समाधान।
हामी rafter को चरम गर्न निश्चित सन्दर्भ एक लाइन प्रयोग गर्न सिफारिस गर्ने सामाग्री को सही पङ्क्तिबद्ध राख्न।
तेस्रो र चौथोमा पानाहरू संग नै तरिकामा जारी राख्न र समाधान हरेक अन्य टाइल मा चार पानाहरू अवस्था पुन: जाँच, त्यसपछि।
आवश्यक छ भने, अन्तिम पाना को चौडाई तदनुसार कटौती गर्न सक्छ, अन्तिम एक सम्म नै बाटो मा पानाहरू इकट्ठा।
ध्यान! एक overlapped हरेक पाना सकेसम्म नजिक भेला हुनुपर्छ।
दोस्रो पङ्क्ति हामी सधैँ आधा lengthways मा कटौती छ (टाइल तीन पङ्क्तिहरू) एउटा पाना संग बायाँ देखि सुरु सुझाव लागि .यो तपाईंलाई कंपित पङ्क्तिहरू को तेर्सो मिल्दाजुल्दा जारी गर्न, र जस्तै तपाईं एक क्रसओभर जोगिन अनुमति दिन्छ को मिल्दाजुल्दा मा चार पानाहरू।
सुरुमा कटौती बाँकी पानाहरू तिनीहरूले समायोजन रूपमा छत को अन्त मा प्रयोग गर्न सकिन्छ रूपमा बर्बाद छैन।
एउटै तरिकामा विपरीत पक्ष पूरा गर्नुहोस्।
अप रिज टाइल इकट्ठा गर्न पहिलो ती संग विपरीत पक्षमा टाइल्स को ठाडो पङ्क्तिहरू लाइन,।
ध्यान! कम ढलान लागि वा विशेष हावाको वा rainly क्षेत्र मा राल सीलेंट वा सिलिकन सीलेंट द्वारा मिल्दाजुल्दा मुहर गर्न उपयुक्त हुन्छ।
चार ढलान छत को त्रिकोण पक्ष लागि, पहिलो पाना, बीचबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यसपछि दुवै बायाँ र दायाँ निर्देशन जारी।
विकर्ण रिज asesemble गर्न हिप लाइन साथ पाना कटौती
रिज टाइल को स्थापना यसलाई आधा मिल्दाजुल्दा मा चार पानाहरू को क्रसओभर बच्न कटौती गर्नुपर्छ, पहिलो टाइल side.For एक देखि सुरु गर्नुपर्छ।
75mm को लम्बाइ र 6.3mm को व्यास संग आत्म-स्क्रू किनारा गर्न नजिकै रिज समाधान गर्न र यसैले घुसपैठ समस्या छैन मुख्य tile.Take हेरविचार मा रिज टाइल समाधान गर्न आवश्यक हुनेछ।
विकर्ण रिज को स्थापना गर्न, यो स्थापना गरिनु पर्दछ सीधा हिप संग मुख्य tile.Diagonal रिज टाइल गर्न पूर्वनिर्मित किनाराको समाधान गर्न आवश्यक छ 75mm को लम्बाइ र 6.3mm को व्यास संग line.Self-स्क्रू राख्न पङ्क्तिबद्ध गर्नुपर्छ तलबाट 50mm एक मिल्दाजुल्दा संग माथि।
तीन तरिका जडान रैखिक रिज र चार ढलान छत लागि विकर्ण एक बीच सामेल तत्व रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
दुई converging pitches सामेल द्वारा सिर्जित comer को valley.Position भनिन्छ र comer को केन्द्र देखि दुई समानान्तर स्ट्रिप्स, 240 मिमी समाधान, बेसी को comer गर्न समानान्तर छ।
बेसी नाली आत्म-स्क्रू वा नङ प्रयोग गरेर स्ट्रिप्स मा कृत्रिम राल प्यानल वा धातु बनेको समाधान।
जस्ती उपत्यका रोल पनि उपत्यका gutter.Position यसलाई लागि, slab.Begin मा ध्यान यो तल सेट आत्म-स्क्रू वा नङ प्रयोग गरेर स्ट्रिप्स मा बेसी को चरम किनाराको समाधान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ रिज लाइन बाट सुरु कुना मा।
बेसी लाइन अनुरूप पाना हुन स्थिति अघि पूर्व आकारको, तर तिनीहरूलाई पूर्ण सीधा उपत्यका लाइन छ, सच्चाए पछि, फेरि झुन्डियो संभावना छोडेर पर्छ।
जडान पर्खाल संग
आत्म-स्क्रू वा नङ द्वारा पर्खाल र टाइल गर्न चमकता बोर्ड छडी प्रयोग sidewall Shengyu राल प्यानल वा धातु बनेको फ्ल्याशिङ र सिलिकन सीलेंट संग चमकता को उच्च अन्त मुहर।
जडान chimneys संग
sidewall प्रयोग फ्ल्याशिङ Shengyu राल प्यानल वा धातु बनेको, पर्खाल र टाइल आत्म-स्क्रू वा नङ द्वारा गर्न चमकता बोर्ड छडी र सिलिकन सीलेंट संग चमकता को उच्च अन्त मुहर।
, कृत्रिम राल वा धातु flashings प्रयोग र सिलिकन सीलेंट संग चमकता को उच्च अन्त मुहर पर्खाल र टाइल आत्म-स्क्रू वा नङ द्वारा गर्न फ्ल्यास बोर्ड छडी। (माथि चित्र हेर्नुहोस्)
Flashings धातु बोर्ड द्वारा साइट मा प्रक्रिया गर्न सिफारिस गरिएको हो, छत pitches र chimneys को स्थिति रूपमा फरक छतहरुको लागि चल छन्।
एल्यूमीनियम वा जस्ती रोल पनि टाइल र chimney.Stick को रोल बीच पानामा नङ द्वारा चिम्नी र त्यसपछि गर्न रोल को अन्य अन्त उच्च अन्त मुहर को chimney.Fix वरिपरि सबै जडान लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
जडान रोशनदान संग
पाना सामान्य तरिका मा रोशनदान गर्न नजिक सम्म भेला हुनुपर्छ।
को रोशनदान को सही माप लिनुहोस्, लचिलो पोलिशर वा एउटा पोर्टेबल पातलो-दाँत देख्यो संग पानामा एक सटीक स्लट बनाउन।
को दायाँ पानामा तल्लो जडान लागि नेतृत्व कब्जा ओभरल्याप र राम्रो पानामा फिट आफ्नो हात यसलाई कोर्न।
त्यसपछि, यो आकारको पाना राख्न यो भाग छेउ र माथिल्लो जडानहरू र मिल्दाजुल्दा राम्रो फिटिङ को कमसल तत्व रोशनदान तल्लो पक्षमा नेतृत्व कब्जा को extremity संग।
विकर्ण रिज को कोडांतरण खत्म पछि, विकर्ण रिज तल अन्त मा टर्मिनल विकर्ण रिज टुक्रा सम्मिलित र Rivets द्वारा विकर्ण रिज गर्न ठीक।
बाङ्गो रूफ टाइल
बाङ्गो छत पाना
फाइबर नालीदार पाना रूफ
फाइबर प्लास्टिक रूफ
पाना छत लागि फाइबर
रेशा छत सामाग्री
रेशा रोशनदान पाना
आगो retardant प्लास्टिक रूफ पाना
हरियो रेशा छत
लामो अवधि छत पाना
बहु रंग पीवीसी रूफ पाना
सादा प्रकार बांस रूफ पाना
प्लास्टिक ग्यारेज रूफ पाना
प्लास्टिक परमवीर चक्र छत पाना Shed लागि
प्लास्टिक रूफ पाना
प्लास्टिक रूफ टाइल
बैजनी रूफ टाइल
परमवीर चक्र सामाग्री निर्माण सामाग्री रूफ टायल
परमवीर चक्र प्लास्टिक रूफ पाना
पीवीसी प्लास्टिक रूफ टाइल
परमवीर चक्र रूफ पाना प्रोफाइल
पीवीसी छत पाना
परमवीर चक्र छत टाइल
वर्षा संरक्षण छत पाना
रूफ पानाहरू मूल्य प्रति पाना
छत पाना मूल्य
छत Shingles पाना
शाही प्लास्टिक रूफ टायल
पारदर्शी छत पाना
समलम्ब रूफ पाना
लहर छत Shingles पाना
सेतो रेशा पाना
कार्यशाला रूफ टाइल
कृत्रिम एएसए राल छत पाना RY720-एक